“Fifandonana sy Rà Latsaka no Hany Mahaliana ny Media” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2017 10:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, English
Angatahan'ny Reframed Stories ny olona mba hamaly ireo lohatevitra manandanja any anaty fandrakofam-baovao momba azy ireo sy ireo olana miantraika amin'izy ireo. Tantara mifantoka amin'ny fandinihan'ireo olona izay mazàna no tsy izy tenany fa ny hafa no misolo tena azy any anaty fampitàm-baovao.
Iray amin'ireo olona miandraikitra ny bilaogy Sarayaku Sarayaku: El Pueblo del Medio Día i José Santi,.
Hitako fa toa tsy mandrakotra ny lohahevitra rehetra manandanja amin'ireo teratany ao Ekoatora ny media.
Ao Sarayaku, anokananay ezaka betsaka tokoa ny fampahafantarana ny Kawsay Sacha, tolokevitray ho aminà fomba fiaina iray vaovao izay anasàna ny olona ho tsara fihavanana amin'ny tontolo misy azy, amin'ny tenany ary amin'ny hafa.
Ireo teny mibahan-toerana ao anatin'ireo lahatsoratra 240 mitanisa ny “sarayaku” sy “territory / faritany” teo anelanelan'ny Aprily 2013 sy Jona 2017 hita tany anatin'ireo fantina efatra an'ny Media Cloud an'ireo mpamoaka vaovao mampiasa teny Espaniôla ao Ekoatora. (Jereo ny fikarohana niandohàna; Sokafy ho lehibebe ny sary)
Resahan'i Kawsay Sacha ihany koa ireo lohahevitra toy ny fanabeazana, ny fomban'ireo fikambanana, ny ara-panahy, ny fahasalamàna ary ny fikajiana ny tany, indray mandeha indray, izay tsy misy hita eto na iray aza ny momba azy ireny. Ezahanay ny mampahafantatra ny olanay sy ny tanjonay amin'ny alàlan'ny tranonkala sy ny media sosialainay, saingy tsy mba rakofan'ireo fampitam-baovao mahazatra.
Ady, fifandonana ary rà latsaka no hany mahaliana ny media ny mitatitra azy, ary tsy raharahainy izay lohahevitra hafa manandanja aminay ihany koa.
Voamariko ihany koa fa ny anaran'ireo politisiana irery ihany no hitako eto, nefa betsaka noho ireo ny olona mandray anjara. Izany no antony anaovanay ezaka betsaka ao amin'ny Sarayaku amin'ny famoronana ny fampitam-baovaonay manokana, ary izany ihany koa no antony anirianay ny hisian'ny fiarahana miasa amin'ireo media hafa eto amin'ny firenena na iraisampirenena sy ireo fikambanana liana aminà fiarahana miasa.
Ilainay ny mahita habaka malalaka araka izay tratra mba hizarànay amin'izao tontolo izao ny tolonay sy ny zavatra iainanay.
Solontena avy ao Sarayaku. Sary: José Santi.
Zaraiko ity ho fanehoana ireo safidy hafa amin'ny fiainana sy ny fisian'ireo vahoaka teratany miaina ao amin'ny faritra Amazona Ekoatoriana. Ity dia ezaka iray hiarovana ny tolonay manohitra ireo tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao amin'ny faritaninay, izay tsy mitondra afa-tsy olana, aretina, faharinganana, faharavàna, ary fahafatesana ho an'ireo vondrom-piarahamonina. Nanaovan'ireo vahoaka ao Sarayaku fampiharana ny andianà hetsika iray sy ireo fifanekena stratejika niarahana tamin'ireo mpikambana avy aminà fikambanana teratany samihafa ao amin'ny faritra mba hanohanana ny tolona hisian'ny fiovàna, fiovàna izay ifanohanan'ireo vondrom-piarahamonina sy olom-pirenena isankarazany, ary asainay ireo media eto amin'ny firenena sy ny iraisampirenena mba ho lasa mpifanome tànana stratejika hifanampy hanatratrarana sy hizaràna ireo hetahetan'ny vahoaka teratany amin'ny fomba manontolo sy mahomby any anatin'ireo sehatra sosialy hafa.
Ity dia ampahany amin'ireo andiany izay vokarina anaty fiarahamiasa akaiky amin'ny vondrom-piarahamonina Sarayaku sy ny Shuar, samy any amin'ny faritra Amazona Ekoatoriàna avokoa. Nanao tolona naharitra ela tokoa ireo vahoaka Sarayaku sy Shuar, teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisampirenena mba hampitsaharana ireo tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao amin'ny faritanin'izy ireo, ary ny fandefasana hafatra ho an'ny daholobe dia ampahany iray nanandanja tokoa tamin'io tolona io. Nangatahanay mba hamaly ny sasantsasany tamin'ireo fandalinana savaravina natao tamin'ireo media momba ny fanehoan'ny vaovao ireo lohahevitra mifandray amin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo ireo mpikambana.